Home Wararka Ingiriiska oo tababar siisay Ciidamo ka kala tirsan ATMIS & CXDS
32-askari oo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan sirdoonka, dabagalka iyo sahanka loogu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho.
Boqortooyada Ingiriiska iyo xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa iska kaashaday tabbaarkaan, sida lagu sheegay warbixinta.
Sarkaal ka socday dowladda UK oo lagu magacaabo Lt Col Jeremy Sapwell, ayaa sheegay in tababarkaan uu muhiim u yahay jabinta al-Shabaab.
UK ayaa dhowaan sheegtay inay billaabayso tababaro milatari oo ay kor ugu qaadayso awoodda ciidamada ATMIS iyo kuwa dowladda Soomaaliya, si ay isaga kaashadaan la dagaalka Alshabab iyo xorraynta deegaannada gacantooda ku jira.
UK ayaa tababarayaal usoo dirtay Soomaaliya, kuwaas oo kaalin ka qaadanaya kala guurka amniga Soomaaliya, gaar ahaan sidii ciidamada Soomaaliya ula wareegi lahaayeen masuuliyadda amni kadib marka ay baxaan ciidamada ATMIS.
Previous articleGudoomiyaha golaha Shacabka oo la kulmay Wakiilka Xog-hayaha Guud ee QM
Next articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo bilaabay raadinta dhalinyaradii loo qaaday Eritrea
Warar kala duwan oo ka soo baxaya Dagaalkii Kismaayo ka dhacay
(Caddeyn) Arday Shiinaha ka yimid oo laga waayay coronavirus, basle DF...